Theatre Apartment - kwiMarike Square e Głogów
I-Apartment yeTheatre yindawo yethu yodwa, evumela ukuba sinikele nge-100% yengqwalasela yethu kunye nexesha kuyo. Siluphawu olungena kwimarike yaseGłogów, ngoko ke sifuna ukwakha izimvo ezakhayo kunye nokuthembela kwiindwendwe zethu! Xa sasilungisa indawo esasihlala kuyo, sasikhokelwa ngumgaqo othi “Ndifuna ntoni xa ndiseluhambeni” saza ke sazanelisa ezi mfuno.
Iindwendwe ezikhetha ukupheka ngokwazo zingasebenzisa ikhitshi exhotyiswe kwindawo yokuhlala. I-Apartment yeTheatre ixhotyiswe ngokupheleleyo ngokuqwalasela iinkcukacha, ukuze iindwendwe zethu zingaphuthelwa nto ngexesha lokuhlala kwazo nathi. Ifulethi lilungele amaqabane okanye abahlobo, njengoko iindwendwe zinokudibanisa iibhedi kwigumbi lokulala ngeentambo ezikhethekileyo okanye zishiye zihlulwe.
Le ndawo ibekwe kumbindi weGłogów! Iifestile ezijongene neTheatre kunye nezindlu zaseGłogów kwi-Market Square ziya kubonelela ngombono omkhulu, kokubili emini nasebusuku. Kukho iindawo zokutyela kunye nee-pubs zasekhaya / iiklabhu kufutshane nendawo yethu.
Uqhagamshelwano ngefowuni nange-imeyile